Caafimaadka: Raysashada waa dib-u-barashada si 'caadi ah' caadi ahaan | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka Recovery
Ujeedada balwadu waa mid ka xoog badan dhinac kasta oo kale oo nolosha balwadda ah. Tani waa run sida balwadda maandooriyaha ah sida ay u tahay balwado kasta oo kale. Dib u soo kabashada ayaa beddeley isbeddeladan. Si tartiib tartiib ah, balwadu waxay u soo shaac bixisaa sida 'sida caadiga ah' loo doonayo.
Wixii tallaabooyin wax ku ool ah ee dib u soo kabashada iyo ka-hortagga ka eeg Mawduuca XHUMX-Qaababka 3 ee Ka-joojinta Porn:
Hawlaha kor u qaadaya soo saarida oxytocin ee maskaxda (isku xidhka, saaxiibtinimada, shaqada iskaa wax u qabso, xayawaanka xoolaha, jimicsiga jireed, waqtiga dabiiciga ah, cuntada joogtada ah, hurdo joogto ah, farshaxanka sida qoob ka ciyaarka, heesida, dhaqdhaqaaqa, majaajilada, waxqabadka muujiya dareenka sida rinjiga, sawirida, qoraalka iyo wixii la mid ah) dhammaantood waxay caawiyaan yareynta jahwareerka calaamad u ah dopamine hooseeya. Oxytocin ayaa sidoo kale ka caawisa yareynta cortisol ee nidaamka nuurokimiyada ee la xariirta niyad-jabka iyo walbahaarka.
Waxay u muuqan kartaa inay tahay sida 'daroogada' ama habdhaqanka doorashooyinka oo xoojin kara cadaadiska iyo jilicsanaanta. Diirada guud ee diirada badan ee xanuunka iyo xanaaqa haddii la gooyo, waxay dhici doontaa illaa iyo inta aan dooneyno in aan ku marno habka looga saarayo 'dhalada ka soo boogta' iyo ineynnu maskaxdeenna u oggolaanno in mar kale dib loo soo celiyo abaalmarinta dabiiciga ah. Qaar waxay u yeeraan 'dib u habeyn' maskaxda.
Si jacayl ama 'Dammaanad lab ah', waxaan u baahanahay dheelitirnaan caafimaad qabta labadaba dopamine iyo oxytocin. Taasi waa sababta nooc kasta ha ahaato, taas oo lagu garto ciribta halista ah ee daroogada qofku doorto, waa kan ugu wayn ee jecel cilaaqaadka. Dulucda ama kuwa isticmaala dhibaatada waxay noqdaan kuwo dareen ah, oo aan awoodin in ay jaceyl u muujiyaan, u dardar geliyaan ama ay ka warqabaan baahida dadka kale. Waxaan u baahannahay inaan caawino iyaga iyo nafteenaba, dib u helno qiimaha noolasha nolosha si buuxda oo leh qaab caafimaad leh oo hal abuur leh.
<< Balwadda Dabeecadda